Nagu saabsan - Shijiazhuang AoFeiTe Medical Devices Co., Ltd.
Shijiazhuang AoFeiTe Medical Devices Co., Ltd. Waxay ku taal magaalada shijiazhuang, gobolka hebei, Shiinaha.
Waa soo saare xirfadle ah waxayna ku lug leedahay naqshadeynta, wax soo saarka iyo ganacsiga.
Waxaan nahay soo saare wax soo saarka caafimaadka isboortiga, sida suunka Taageerada Dhexda, Suunka Taageerada Hooyada,
Jilibka ilaaliyaha, difaaca curcurka, suxulka ilaaliyaha, barkinta hawada, cagaf ilmo galeenka, iwm.
Wax soo saarkayagu waxay heleen shahaadooyin sida CE, FDA, SGS iyo ISO13485.
Wax soo saarkayada ayaa inta badan loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Afrika, Bariga Dhexe, Koonfurta Aasiya, Australia, Japan, Korea iyo dalal kale iyo gobollo.
Mid ka mid ah adeegyadayada gaarka ah waa amarro la habeeyay. Waxaan soo saari karnaa badeecooyin loogu talagalay astaantaada iyo sanduuqyada midabka leh.
Tan iyo aasaaskeedii, Aofeite wuxuu had iyo jeer ku dhegan yahay mabaadii'da shirkadaha ee "u adeegidda bulshada iyo daryeelka caafimaadka".
U hogaansanaanta "u heellan, is-hormarin" ruuxa ganacsiga, si loo kasbado kalsoonida macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.
Aofeite had iyo jeer waxay aaminsan yihiin "Tayada Frist, Macaamiisha Frist, Sumcada Frist iyo Frist Service" .Dhammaan shaqaalaha ayaa sameyn doona dadaallo ay kula shaqeyn doonaan adiga oo guuleysta!
Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno!
"TP" waxaa loola jeedaa lamaanayaal sare.
Ujeedada kulanka wadaagga "TP" ayaa ah in la xoojiyo isku xirka shirkadaha, in la is kaabo waxyaabaha ay ka faa'iideystaan, in la barto khibrada midba midka kale, la ballaariyo iskaashiga iyo in la sameeyo horumar guud.
Rugta ganacsiga ee waqooyi-bari Shiinaha waxay u timid Aofeite howlo is-weydaarsi.Waxaan u gudbinnay qaabab iyo waayo-aragnimo ganacsi iyo maamul kooxeed.Waxaan ku hoggaaminey inay booqdaan xafiiska xafiiska shirkadda oo ay soo bandhigaan waxqabadyo maalinle ah oo xafiiska ka socda.
- Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno !.
Raasamaal (Milyan US $)